निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको 'रियल एक्टर' हो : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको ‘रियल एक्टर’ हो : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको ‘रियल एक्टर’ हो : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
बीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि ’रियलएक्टर’ भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले ’मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनभुयो । विरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४५औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्वोधन गर्ने क्रम ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कोभिडका कारणले दुई प्रतिशतको नेगेटिभ ग्रोथ भइरहेको अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
“निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्नुका साथै मुलुकलाई राजस्वमा योगदान पुराउने र पूर्वाधार निर्माण र यसको विकासमा पनि मुख्य भुमिका खेलेकाले निजी क्षेत्र भनेको देश विकासको एक रियल एक्टर भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा कर तिर्ने देशहरुको हिसाब गर्ने हो भने १९० देशहरुको हिसाब गर्दा हामी १७५स्थानमा रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै लजिस्टिकको हिसाबले ११४ वटा देशलाई तुलना गर्दा खेरी हामी १०८औँ नम्बरमा परेको जानकारी गराउनुभयो ।
देशमा व्यवसायिक क्रियाकलापहरु बढाउने वातावरणका लागि नेपाल पछाडि रहेको भन्दै त्यसको सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देशमा लगानको वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको अख्तियार गर्न तीनै तहको सरकारले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपने बताउनुभयो ।
२०७७ फागुुण २८ गते १८:२६ मा प्रकाशित
निष्क्रिय साझा सहकारीलाई पुनर्संचालन गर्दै सरकार, सहकारी शुद्धीकरणमा के-के छन् रणनीति ?
प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको औषधी बेसार भन्दा मजाक ठान्नेहरु नै खोजी/खोजी खान थालेपछि बढ्यो खपत
मागेर मुलुक समृद्ध बन्दैन भन्दै एमाले नेता लालबाबु पण्डित किन झापातिर ?
फोनमा कुरा गर्दागर्दै साउदीमा एक नेपालीको मृत्यु
यसरी हुन्छ लोकसेवा आयोगको नतिजा किनबेच !